Chii chinonzi Agile Development? - Zvinoreva, Mhando & Bhizinesi Zvishandiso - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Agile, kukurumidza kukura, Product development, Technology Kubvunza, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Agile kuvandudza ndiwo software development nzira iyo inoshandisa iterative maitiro eAgile project management viz. kuronga, kukudziridza uye kuendesa kusangana nekushanduka kwemutengi zvinodiwa uchiona kukurumidza kukurumidza kwema prototypes. Mune agile maitiro ekugadzirwa kwechigadzirwa, izvo zvinodiwa uye mhinduro zvinoshanduka kuburikidza nekubatana pakati pekuzvirongedza-chikamu chinoshanda-chemitezo nhengo. Agile uzivi hunokurudzira kurangwa project management maitiro uye kushanda kwechikwata kunokurudzira kuongororwa nguva nenguva uye kugadzirisa nepfungwa yekuunza kushanda Software. Inokurudzira hutungamiriri, kushanda pamwe chete, kuzvironga, kukura kwevanhu, uye kuzvidavirira.
Iyo Agile methodology inotarisa pakukurumidza kuendesa kwechikumbiro muzvikamu zvinoshanda zvizere. Panzvimbo pekusarudza nhanho, nguva yese "nguva-yakaiswa" muzvikamu zvinonzi "sprints." Sprint inguva (kazhinji mumavhiki) ine runyorwa rwezvinotengeswa. Izvi zvinotengeswa zvinoiswa pamberi pahwaro hwe bhizimisi zvinangwa uye misika mamiriro. Basa rinogona kuongororwa neboka reprojekiti uye mutengi kuburikidza nemazuva ese anovaka uye demos pakupera kwega rega sprint.
Iyo agile fomati nzira inoshandisa seti yeinjiniya maitiro akanaka anotendera kukurumidza kushanda kwekuvandudza uye kuendesa. Iyo inzira inosarudzika yekusimudzira neC-level vatariri sezvo ichienderana bhizimisi zvinangwa, zvinodiwa nevatengi uye zvinangwa zvekambani ne kuvandudza kwesarudzo uye kuverenga zvigadzirwa kumashure.
Makore Makore Ekubudirira kweAgile:
Muna 2001, 17 nhamba dzinotungamira mu Software indasitiri yakagadzira iyo Agile Manifesto iyo yakasimbisa kukosha kweiyo agile nzira uye agile nzira. The whole agile movement or kukurumidza kukura maitiro akavakirwa pamifungo yeiyo Agile Manifesto.
The agile Software budiriro inosimbisa zvinhu zvina zvakakosha:
Tarisa pane kudyidzana kwega uye kubatirana pamusoro pezvakaitwa uye maturusi.
Kunyanya kukoshesa kusimudzira kushanda Software pamusoro pezvinyorwa zvakazara.
Kufananira kwekudyidzana pamwe chete nemutengi pamusoro pekutaurirana kwechibvumirano.
Kugadzikana kupindura shanduko pane kutevedzera hurongwa hwakaomarara.
Bhizinesi Nyaya Ye Agile Kuvandudza:
Idzi mbiri dzakakurumbira nzira dzekuvandudza dzinoshandiswa nhasi dzinosanganisira mapopoma uye agile nzira. Nepo kukura kwemapopoma kuchitarisa kune kwakateedzana kuvaka kwechigadzirwa, agile inoshanda mukudzokorora. Ose ari maviri anozivikanwa nekuda kwezvikonzero zvavo uye sarudzo yakajeka zvinoenderana neprojekti.
Waterfall inzira yakatwasuka apo kutevedzana kwezviitiko kunotanga nekuunganidza izvo zvinodiwa uye zvinofamba kuburikidza nekugadzira, kukodha, yuniti uye kuyedza system uye kuyedzwa kwekugamuchirwa kwevashandisi (UAT) kusvika kwekupedzisira kuendesa. Maitiro aya anoshanda nemazvo nekuda kwekutaurirana kushoma kunodiwa nevatengi. Sezvo zvinodiwa zvatariswa zvisati zvaitika zvinopa chiyero chekuvandudza kwakarongeka. Maitiro aya anokundikana kana tikada kubatisisa chigadzirwa maererano neshanduko mumamiriro emusika kana zvinodiwa nemutengi. Nekuda kwekushanda zvakateedzana basa rakawanda rinofanira kuitwazve.
Agile kuvandudza, kune rimwe divi, iterative, timu-based nzira yekuvandudza. Inotarisa pakubatanidzwa kwevatengi kwakazara mukati mekuvandudza kutenderera. Izvo zvinoshanda zvakanyanya kana isu tiri kushanda pane zvinorema mhinduro uko kwekupedzisira maficha echigadzirwa chisati chapedzwa. Kana iwe uri kutarisa kune yakaonda kutanga nzira yekuvandudza iyo chigadzirwa chinogoneka usati watanga chigadzirwa chekupedzisira ipapo kukurumidza kukura chisarudzo chakakodzera. Pane zvinopesana, kana iwe uine yakatarwa chinangwa mupfungwa ipapo mapopoma isarudzo yakanaka nekuti haizobatanidze zvakanyanya kutarisisa kwako uye inogona kuitwa nyore nyore nezvikwata zviri kure.
Read More: Nei ma Startups Achifanira Kufunga ROR yeRipid Chikumbiro Kuvandudza?
Akakurumbira Agile Ekuvandudza Maitiro.
SCRUM chiri kukurumidza kukura methodology inotarisa pakutarisira basa munzvimbo yekusimudzira timu. Scrum inotsigira kushanda muzvikwata zvidiki zvekusimudzira (ti- 7 kusvika kunhengo 9) uye uvape simba rekugadzira chigadzirwa nekubatana pamwe chete. Scrum inounza munhu wese pachikwata, kubva kumuridzi wechigadzirwa kana bhizimisi vanobatana navo kuti Developers, pamwe chete kubvumirana pane maitiro uye nzira. Zvinangwa zvakananga zvinobva zvatemerwa 30-day sprint, pakupera kwacho chinodiwa. Software prototype inopihwa.
Yakanyanya Kuronga (XP):
Kunyanya kuronga hunyanzvi hunoshanda kana paine shanduko kazhinji muzvinodiwa kana zvinodiwa kubva kune vatengi kana kana vasina chokwadi nezve maficha ekushandisa. Iyo inosimbisa kazhinji "kuburitswa" kwechigadzirwa chechigadzirwa mune ipfupi budiriro kutenderera. Izvi zvinovandudza kugadzirwa kwechikwata chekuvandudza uye inosvitsa nzvimbo dzekutarisa uko chero shanduko dzekupedzisira dzingaitwe zviri nyore. Iyo yakanyanyisa chirongwa chinotarisa kune vatengi pamusoro pezvimwe zvinhu zvese.
Tsamira software kuvandudza:
Tsamira software kuvandudza inosimbisa pakushandisa kwakakwana zviwanikwa mukuvandudza maitiro. Chinangwa ndechekuvandudza mashandiro uye kurerutsa marara. Tsvina, pano, mune yakasarudzika uzivi, inoreva chero chinhu chisingawedzere kukosha kuchigadzirwa nekudaro, kuchichipa tsananguro yakafara kwazvo iyo yakavhurika kududzirwa.
Mune zvakajairwa Software kutenderera kwebudiriro, maburi akawanda anoramba ari mukugadzirisa kwekodhi. Mukuvandudza kwakaonda, isu tinogadzirisa chikamu chose che Software yekuvandudza hupenyu uye gadzira chigadzirwa chekupedzisira chine kodhi shoma. Nemaitiro akaonda, marara mashoma anogona kutarisirwa pamatanho ese.
Honda chigadzirwa chinobudirira timu inofanirwa kutarisa pane zvinodiwa nevatengi uye mhinduro yevatengi uye voishandisa semazano ekuvandudza mune ramangwana. Kunze kwekupa kwekutanga kwemhinduro zvese zvinowedzerwa zvinofanirwa kusarudzwa mushure mekuburitswa kwemuenzaniso wekutanga kubvisa kudiwa kwekuitazve basa nekuda kweshanduko mumamiriro ezvinhu emusika.
Kana iwe uchitsvaga webhu kana mobile application Developers ipapo iwe panzvimbo chaipo. At NewGenApps, isu takashanda pane zvitsva mhinduro uye matekinoroji uye tine hunyanzvi hweanopfuura makore gumi. Taura nesu nhasi kubvunzurudza chirongwa kana POC.
Dynamic Systems Kuvandudza Nzira (DSDM):
Dynamic Systems Development Method kana DSDM ndeye agile chirongwa chekuendesa hurongwa. DSDM yakatanga kushandiswa sea Software nzira yekuvandudza uye inovhara huwandu hwezviitiko mune yakazara chirongwa lifecycle. DSDM inosanganisira nheyo dzakasimba uye hutongi.
Iyo DSDM Agile Project Sisitimu inzira inowedzera uye inodzokorodza iyo inobatanidza zviito zvekukurumidza zvekusimudzira, kusanganisira inoenderera uye yakazara kubatanidzwa kwevatengi.
Iyo Dynamic Systems Yekuvandudza Nzira inoonekwa seyakafara huwandu hwakawanda hweiterative uye inowedzera yekuvandudza masisitimu uye inonyanya kutsigira chinhu chakanangiswa uye chakashata nzira.